Dhamaan wararka imaan doona Facebook Messenger sanadka 2019 | Androidsis
Shalay ayaa F8, shirkii Facebook, la qabtay, kaas oo aan ku baran karno wararka ku imaan doona shabakada bulshada iyo codsiyadooda. Mid ka mid ah barnaamijyadan waa Messenger, kaas oo sameyn doona ku dar marti badan oo muuqaalo cusub sanadkan. Ilaa hadda sanadkan, dalabku wuxuu nooga tagay laba isbeddel oo muhiim ah. Dhinaca mid interface cusub, oo yimid Janaayo iyo bishaan Abriil ayaa ugu dambayntii la soo saaray hab mugdi ah.
Facebook hadda wuxuu xaqiijinayaa dhammaan wararka in waxaa lagu soo bandhigi doonaa Rasuulka sanadkaan oo dhan. Isbedelo taxane ah oo ay shirkada farriinta farriinta shirkaddu ku doonayso inay ku ilaaliso sumcaddeeda suuqa. Maxay yihiin isbeddelada ay nooga tagayaan 2o19?
Shirkadda ayaa sheegtay in sanadka 2019 uu noqon doono sanad kala guur ah oo loogu talagalay Messenger. Tan iyo markii la filayo inay dhisto barnaamij ku saleysan asturnaanta, iyadoo si cad loogu tilmaamayo ceebihii kala duwanaa ee uu Facebook ku lahaa sannadihii la soo dhaafay arrintan. Sidaa darteed, waxay rabaan in barnaamijku noqdo mid deg deg ah, mid gaar ah iyo waliba mid la wadaagi karo, maaddaama farriimaha lagu diri karo Instagram iyo WhatsApp (in kasta oo aan la ogeyn sida shaqadan loo dhexgelin doono). Kuwani waa khadadka ay wararkani ku jiraan barnaamijka.
Marka hore waxaan helnaa Mashruuc Lightspeed. Waa barnaamij cusub, ugu yaraan ku saleysan sharraxaaddiisa. Waa barnaamij qaata meel yar, oo ka yar 30 MB isla markaana si dhakhso leh u socda. Faahfaahin wali lagama bixin arrintaas. Waxa kaliya ee la sheegay in ay hada ku hawlan yihiin, in laga soo dhisay meel hoose isla markaana keenitaankeedu uu qaadan doono muddo si ay u rumowdo. In kasta oo wax waliba ay muujinayaan inay ballanqaadayso inay noqonayso nooc ka mid ah Rasuulka, laakiin ka dhakhso badan oo ka fudud.
Sida loo joojiyo goobooyin lagu sheekeysto Facebook Messenger
Dhinaca kale, waxaa la sheegaa in boos loo hibeeyay ka raadi asxaabta iyo qoyska kuwa aad inta badan la fal gasho. Sawirada, fiidiyowyada iyo sheekooyinka waxaa laga filayaa inay yeeshaan door gaar ah. Mar labaad, ma hayno taariikho arrintan la xiriira oo ku saabsan sheekadan cusub, maadaama ay tahay wax ay iyagu hadda horumarinayaan. Marka waxay qaadan doontaa dhowr bilood in daqiiqad ay si rasmi ah ku timaado.
Fiidiyowgu waa qaab soo caanbaxay in muddo ah, sidoo kale Messenger. Sida laga soo xigtay shirkadda, qiyaastii 410 milyan oo qof ayaa adeegsada wicitaanada fiidiyaha ee abka bil kasta. Intaa waxaa dheer, qiyaastii 2.000 bilyan oo daqiiqo maalintii ayaa lagu qaataa wada sheekaysiga iyo fiidyowyada. Sababtaas awgeed, astaamo cusub ayaa lagu soo bandhigey arintan qaybtooda, taas oo lagu xoojinayo cunsurkan barnaamijka.
Midka hore waa hawl lagu arki karo videos asxaabtaada on Messenger waqtiga dhabta ah. Waa shaqo raadineysa in la abuuro qol dal-ku-gal ah oo aad ka ogaan karto isla markaana la wadaagi karto fiidiyowyada. Intaas oo dhan intaad isla sheekaysan kartid isla waqtigaas, adoo adeegsanaya qoraal, ku jira dalabka ka qaybgalayaasha kale. Hawshani waa inay diyaar ahaataa kahor dhamaadka sanadka, sida ay ku yiraahdeen Facebook. Laakiin ma aysan siinin taariikho cayiman oo ay bilaabi doonaan.
Second waxaan ka heli a codsiga desktop-ka ee Windows iyo MacOS. Waa codsi soo degsashadiisu ay bilaash noqonayso oo waxaan leenahay hawlo la mid ah kan ku jira barnaamijka Rasuulka ee ku jira Android iyo iOS. Sidaa darteed, wicitaanada fiidiyowga ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay. Waa barnaamij doonaya inuu noqdo nooc ka mid ah FaceTime, si aad fikrad uga heli karto qorshayaasha shirkadda. Xaaladdan oo kale, waxaa sidoo kale la filayaa in la bilaabo dhammaadka sanadkan. In kasta oo aan la sheegin taariikho cayiman oo la bilaabayo.
Ugu dambeyntii asturnaantu waa mowduuc in badan la xusay bandhigan ku saabsan F8. Facebook ayaa la kulantay fadeexado badan oo dhanka asturnaanta ah labadii sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo wali dhibaato u keenaya shirkadda. Sidaa darteed, waxay rabaan inay tusaale u soo qaataan WhatsApp iyo waxyaabaha u gaarka ah arrintan. Marka dhowr isbeddel ayaa lagu soo bandhigi doonaa Messenger.
Waxaa la sheegay inay durba shaqeyneyso soo bandhigida sirta noocan ah dhamaadka-ilaa-dhamaadka si toos ah dhammaan isgaarsiinta ee Messenger. Marka way u shaqeyn laheyd sida barnaamijyada sida WhatsApp oo kale. Shirkaddu waxay caddeysay inay tahay wax ay ku shaqeynayaan. Sidoo kale, waxaa jiri kara tallaabooyin badan oo asturnaan dheeraad ah, maadaama tani ay tahay wax in badan lagu xusay munaasabadda. Laakiin waqtigan la joogo lama oga goorta isbeddelladani run noqon doonaan. Wax walba waxay muujinayaan inay tahay inay gaarto ka hor dhammaadka sanadka.
Isbedelo badan, oo ku saabsan taas hubaal waxbadan ayaan ka ogaan doonnaa bilaha soo socda. Marka waxaan si taxaddar leh u dhegeysan doonnaa dejinta warkan ku jira Messenger.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Facebook wuxuu soo bandhigayaa waxa ku cusub Messenger sanadka 2019